Mabhuku akanakisa naIsabel Allende, chinyorwa chakasarudzwa | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Novela, dzakawanda
Quote naIsabel Allende
Kana mushandisi weInternet akakumbira kutsvaga "Isabel Allende mabhuku akanakisa", mhedzisiro yacho inonongedza kune akati wandei emazita anotengesa zvakanyanya emakore makumi mana apfuura. Kunyangwe paanotengesa ari nani manhamba, chikamu chakanaka chekushoropodza zvinyorwa chakatarisira pasi basa remunyori weChilean-America uyu. Kunyangwe iwo mazwi akasimba anomupomera kuti aingova kopi yaGabriel García Márquez.
Kunyangwe iye Allende pachake achiziva simba renyanzvi yeColombia, vamwe vanyori vanozivikanwa - Roberto Bolaño, semuenzaniso - vanomuti "munyori akapusa". Chero zvazvingaitika, maonero anozviisa pasi; nhamba, kwete. Zvakanaka, makopi ake mamirioni makumi manomwe nemaviri akatengeswa (akashandurwa mumitauro makumi mana nemaviri) anoisa iye semunyori anoverengeka anorarama mutauro wechiSpanish pasi rese.
Hupenyu hwaIsabel Angélica Allende Llona, ​​mune mashoma mazwi
Chizvarwa cheChilean-America, Isabel Allende akaberekerwa muLima, Peru, muna Nyamavhuvhu 2, 1942. Baba vake vaive munin'ina wekutanga weSalvador Allende (purezidhendi weChile pakati pa1970 na1973, kudzamara aparadzwa naPinochet). Munyori wenguva yemberi akadzidza chikoro chepuraimari pachikoro cheAmerica muLa Paz, Bolivia. Gare gare, ini ndinodzidza kune yakazvimirira yechirungu chikoro muBeirut, Lebanon.
Kubva pakupera kwema50 kusvika pakagadzwa hudzvanyiriri hwePinochet (1973), Allende aigara muChile nemurume wake wekutanga, Miguel Frías. Naiye waakaroora naye kweanopfuura makore makumi maviri uye akaita vana vaviri: Paula (20 - 1963) naNicolás (1992). Gare gare akaenda kuutapwa kuVenezuela kusvika 1988, gore raakaroora Willie Gordon kuUnited States.
Isabel Allende akashanda mumasangano akakosha eruzhinji nenhau muChile, Venezuela neEuropean pamberi pekuzvitsaurira kwake. Munyika yekumaodzanyemba akashanda kuFood and Agriculture Organisation yeUnited Nations (FAO) pakati pa1959-65.
Saizvozvo, aishanda mumagazini Paula y mampato; zvakare, pane akati wandei maChilean terevhizheni chiteshi. Gare gare, aive mupepeti wepepanhau El Nacional uye mudzidzisi pachikoro chepamusoro muCaracas. Mabhuku ake ekutanga kuburitswa aive akananga kuvana, Ambuya panchita y Lauchas, lauchones, makonzo nemakonzo, kubva muna 1974.
Imba Yemweya (1982)
Yokutanga novel, kutanga best seller -Icho chiroto chegoridhe che chero munyori-, Isabel Allende akazviwana nazvo Imba Yemweya. Mhedzisiro yakadaro yekugadzirisa iri, muchikamu chikuru, nekuda kwenyaya yayo inomanikidza yakatakurwa nezvinhu zve mashiripiti echokwadi pamusoro pezvizvarwa zvina zvemhuri yeChilean. Nekudaro fanano iyo vamwe vatsoropodzi vanonongedzera nekuremekedza Makore zana okusurukirwa.
Naizvozvo, mukusimudzira pane nzvimbo yemisoro ine chekuita nerudo, kufa, zvinangwa zvezvematongerwo enyika uye zvemweya zvinhu (zvipoko, kufungidzira, telekinesis ...) Panguva imwe, iro bhuku rinoratidza zvimwe zvakakosha zvezvematongerwo enyika uye zvechitendero shanduko dzakaitika muChile muzana rese reXNUMXth.
Imba yeMweya ...
Mimwe mibairo yakagamuchirwa yenyaya iyi
Novel yegore (Chile, 1983)
Munyori wegore (Germany, 1984)
Bhuku reGore (Germany, 1984)
Grand Prix d'Evasion (Furanzi, 1984)
Ngano dzaEva Luna (1989)
Mumasuo akakumikidzwa kune zvinyorwa ivo vanokurudzira kuverenga iyo novel kutanga Eva Luna (1987) usati waongorora bhuku iri rine makumi maviri nematatu nyaya dzakasainwa nemunyori wenhema. Dzakawanda dzenyaya idzi dzakave nekubudirira zvakanyanya zvinoshamisa, redhiyo uye terevhizheni. Saizvozvowo, mune akati wandei ehunhu hunhu hwemashiripiti hunowanikwa, ndizvo zvazvakaita kune avo vataurwa pazasi:
Saizvozvowo, Rolf Carlé - nyeredzi ya Eva Luna- inowanikwa mune yekupedzisira nyaya, Isu takaumbwa nevhu, ane budiriro inokurudzirwa nenyaya chaiyo yaOmayra Sánchez. Pane rimwe divi, rudo uye kusimba kwevakadzi mukutarisana nedambudziko nekunyongana, zvinomiririra tambo yekuunganidza ingangoita nyaya dzese. Saizvozvowo, kutsiva kwenyonganiso hakugone kuiswa parutivi.
Ngano dzaEva Luna ...
Chinyorwa chenyaya dzino pedzisa Ngano dzaEva Luna
"Ndarama yaTomas Vargas"
"Kana wabata moyo wangu"
"Anonyanya kukanganwika zvekukanganwa"
"Nese ruremekedzo rwakakodzera"
"Tsamba dzerudo dzakatengeswa"
Iyo inhoroondo yehupenyu, yakakurudzirwa nehurwere hwaPaula Frías Allende, mwanasikana waIsabel Allende. Iri bhuku rinotanga sekutaura kwekunyora (tsamba kubva kumunyori kuenda kumwanasikana wake) yakagadzirirwa mushure mekunge Paula awira pakoma uye akagamuchirwa kukiriniki muMadrid. Mundima iyi, amai vanoyeuka hupenyu hwevabereki vavo nasekuru nasekuru.
Zvakare, Allende anonongedzera kune mamwe maanecdotes ehudiki hwake uye kuyaruka, zvese zviri zvega uye zvevamwe hama. Sezvo rugwaro rwuchienderera mberi, amai vanobva mukuora mwoyo voenda pakurega basa ... Zvishoma nezvishoma anotambira kuti mwanasikana wake amira kunyatsove mumuviri unonyepa.
Mwanasikana wepfuma (1999)
Iri bhuku inyaya yenhoroondo inoverengeka inotora makore gumi (10 - 1843) uye inotora mavara ayo kubva kuValparaíso kuenda kuCalifornia. Iyo rondedzero ine zvese zvakajairika zvinhu zveiyo vanotengesa zvakanyanya yeAllende. Ndokureva, kudanana, zvakavanzika zvemhuri, vakadzi vakasimba uye vakatsunga, epic zviitiko, zvinoonekwa zvakajairika uye muripo wevamiriri vayo.
Izvo zvinoitika muChile (1843 - 1848). Ichi chikamu chinoratidza maitiro Eliza - mutambi mukuru wemutambo- akagamuchirwa nemhuri yekwaSommers uye akarererwa munzvimbo yepamusoro-soro.. Saizvozvo, hunhu hwehama dzaSommers (Jeremy, John naRose) zvinotsanangurwa. Pakati pavo, Miss Rose ndivo vaidisisa uye vepedyo naEliza.
Mumwe munhu akakosha aive Amai Fresia, mugari wechiMapuche uyo akapa Eliza hunyanzvi hwakawanda hwekugadzirira. Zvino, iye akanyatso shandura zvakasikwa zvemusikana aive Joaquín Andieta, murume akanaka jaya aishandira Jeremy Sommers. Mukomana akakunda moyo waEliza ndokuva mudiwa wake.
Izvo zvinoitika pakati pa1848 na1849. Inotanga nekuenda kwaJoaquín Andieta kuenda kuCalifornia kunoyedza rombo rake pakati peiyo mhanya yegoridhe. Nguva pfupi yapfuura, Eliza akaziva kuti aive nepamuviri uye akafunga zvekumutevera (seanodzika) pachikepe cheDutch. Pachikepe icho Eliza akava shamwari dzepedyo nemubiki, Tao Chi'en, uyo akamubatsira kuti arambe akavanda uye akamubatsira mushure mekubvisa nhumbu.
Paakasvika muCalifornia, Tao akatanga chirongwa chekugadzirisa uye iye akabva atanga kutsvaga waanoda. Zvichakadaro, muChile, vaSommers vakakatyamadzwa nekutsakatika kwaEliza. Kunyanya mushure mekunge Miss Rose vazivisa: Eliza aive muchero wehukama pakati paJohn nemukadzi weChile (wekusazivikanwa kuzivikanwa).
Eliza akatambudzika zvishoma paakaziva kuti tsananguro yemuviri wemunhu aipara mhosva Joaquín Murieta yakanga yakafanana chaizvo neyomudiwa wake. Gare gare, Eliza akasangana nemutori venhau Jacob Freemont. Akange asingakwanise kumubatsira, asi akaudza mhuri yekwaSommers kuna Eliza (vaifunga kuti afa).
Zvichakadaro, Eliza naTao vakagara muSan Francisco. Muguta iro, akazvipira kubatsira mahure echiChinese kuvaka zvakare hupenyu hwavo kure nebasa iri. Nekufamba kwenguva, chisungo pakati pevaviri chakave cherudo. Pakupedzisira, Joaquín Murieta akabatwa ndokuurayiwa. Ipapo, Eliza paakazokwanisa kuongorora kuti mutadzi ndiani, akanzwa kusununguka zvachose.
Mwanasikana wepfuma: 168/7 ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku akanakisa naIsabel Allende
Mabhuku 8 ekuisa kuravira kwakanaka uye kunotapira mumuromo mako